XOG: Diyaarado jebiyay amarkii dowladda xilli Hawada xirantahay | KEYDMEDIA ONLINE
XOG: Diyaarado jebiyay amarkii dowladda xilli Hawada xirantahay
Dowladda Soomaaliya ayaa joojisay duullimaadyada caalamiga ah ee dalka 17 bishii Maarso, kadib markii uu dalka soo gaaray safmarka Fayruska Koroona.
Muqdisho, Soomaaliya – Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay ogolaaday in dib loo furo duullimaayada caalamiga ah ee dalka, oo la hakiyay 17 Maarso ee sanadkaan, kadib markii uu dalka soo gaaray safmarka Fayruska Koroona.
Wasiirka Gaadiidka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar ayaa sheegay in saddexda bisha soo socto dib loo furi doono duullimaayada dalka, sidoo kalena la furi doono dhamaan goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo Jaamacadaha.
Inkastoo hawada xirantahay, hadana Keydmedia Online ayaa ogaatay in diyaaradda Turkish Airlines ay duulimaadyo toos ah ka sameyneysay todobaadyadii la soo dhaafay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho.
Diyaaradda Turkish Airline ayaa todobaadkaan kaliya Muqdisho ka sameysay saddex duullimaad, taas oo ay kaga soo duushay magaalada Istanbuul ee Turkiga, haseyeeshee ku hakaneysay Jabuuti, ka hor inta aysan imaan Muqdisho.
Dhinaca kale diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa safar ku tagtay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland, iyadoona halkaas rakaab ku dejisay.
Arintaan ayaa muuqato in amarkii dowladda ee dhanka xayiraadda hawada la jebiyay, balse lama oga in dowladda ka warqabto arintaan iyo inkale.